POCKET BEAGLE DOG FAMPAHALALANA SY SARY - ALIKA
Pocket Beagle Dog Fampahalalana sy sary
Riley the Pocket Beagle puppy amin'ny 4 volana
Kisoa kely matevina sy mafy orina vita amin'ny zoro, ny Pocket Beagle dia manana palitao marevaka sy mora karakaraina ary fohy loko mety ho tonga amin'ny loko hound, ohatra, tricolor, mainty sy mainty, mena sy fotsy, volomboasary sy fotsy, na voasarimakirana sy fotsy. Ny palitao dia akaiky, mafy ary lava ny halavany. Ny Pocket Beagle dia toa Foxhound anglisy kely. Ny karandohany dia malalaka sy boribory somary boribory ary mahitsy sy efa-joro ny volomaso. Boribory sy mahery ny tongotra. Ny orona mainty dia manana vavorona feno hofona. Ny sofina lava sy malalaka dia pendant. Ny maso volontsôkôlà na hazelà dia manana endrika fitalahoana fitalahoana. Entina mandehandeha ny rambony, fa tsy aolaka ao aoriana mihitsy. Ny Pocket Beagles dia manana fidradradradrana sy helodraky ny hodi-kazo rehefa mihaza.
Ny Pocket Beagle dia alika malemy paika, mamy, velona ary liana te ho tia ny olon-drehetra! Mpilalao rambony kely falifaly! Miara-miasa, be herim-po, manan-tsaina, milamina ary be fitiavana. Tsara amin'ny ankizy ary tsara amin'ny alika hafa, nefa tsy tokony hatokisana biby tsy kaninina, raha tsy hoe ampiarahina amin'ny saka sy biby hafa ao an-trano rehefa tanora. Pocket Beagles dia manana ny azy samirery. Tapa-kevitra izy ireo ary mailo ary mitaky fiofanana am-paharetana sy mafy miaraka amin'ny mpitarika tena fonosana. Tsy tia avela irery ity karazany ity. Diniho ny mividy roa raha toa ianao ka lasa be. Hialana fanahiana fisarahana , alao ny alikao mpitarika fonosana , ary alao antoka fa ny alikanao dia mahazo fanatanjahan-tena misy heviny ampy, toy ny a entana an-tongotra , miaraka amin'ny fanazaran-tena amin'ny orona izay ahafahany mampiasa ny toetrany mihaza. Ny Pocket Beagle dia miantsoantso mafy izay nahafaly ny fihazana mpitaingin-tsoavaly, saingy mety hanelingelina ny fianakaviana sy ny mpifanolo-bodirindrina aminy. Pocket Beagles dia mirona hanaraka ny orony manokana. Mety hiainga amin'ny fikarohana azy ireo manokana izy ireo raha mamela ny tadiny any amin'ny faritra tsy misy fefy.
Hahavony: 7 - 12 santimetatra (18 - 30 cm)
Lanja: 7 - 15 pounds (3 - 7 kg)
Ny tsipika sasany dia mety iharan'ny aretim-po, androbe, olana amin'ny maso sy lamosina. Mora voan'ny chondroplasia aka dwarfism (tongony eo anoloana izay toy ny an'ny Basset).
Pocket Beagles dia hanao tsara ao amin'ny trano iray raha toa ka mahazo vahana be any ivelany izy ireo. Mavitrika be izy ireo ao anaty trano ary ampy ny tokotany kely.
Energie sy manana tanjaka lehibe, ny Pocket Beagle dia mila fanatanjahan-tena be dia be, izay misy isan'andro MANDEHANA . Ny tokontany misy habe antonony dia hikarakara ny sisa takiana aminy. Mampiasà firamainty foana rehefa mandeha an'io karazany io ianao, raha tsy izany dia mety hanjavona tsy hitady lalao ala ianao.
Ny palitao malefaka lava fohy an'ny Pocket Beagle dia mora karakaraina. Borosio amin'ny borosy mafy volo, ary sasao amin'ny savony malefaka raha tsy ilaina. Shampooo maina indraindray. Aza hadino ny manamarina tsara ny sofina raha misy famantarana ny aretina ary tazomy ny hoho. Ity karazana ity dia mpitrandraka antonony.
Ny Pocket Beagle dia kinova kely kokoa an'ny Beagle mahazatra . Avy any Angletera ilay Beagle kely kokoa. Ampiasaina toy ny alika mpihaza dia afaka mivezivezy eo ambanin'ny kirihitrala sy borosy ary kirihitra izy ary ampiasaina hihaza biby kely toy ny bitro . Ny anarana hoe Old English Pocket Beagle dia niandoha satria ireo mpihaza dia nitondra ireo alika tao anaty laseliny. Voalaza fa lasa Beagles kely habe tany am-boalohany ireo lany tamingana , na izany aza dia noforonina indray izy ireo ary nateraka indray.
Chloe the Pocket Beagle toy ny alika kely amin'ny 4 volana— 'Chloe dia a alika kely hyper, feisty, mavitrika . Tena mafy loha izy ary tia manao zavatra araka ny fombany. Toy ny Beagles rehetra dia manaraka ny orony izy. Tiany ny mihinana ary mandeha mitsangantsangana. Na izany aza maditra izy , hendry be izy. Efa izy poti voaofana ary fantaro mipetraka sy mandry. Tiany ny milalao ny kilalaony ary maka fotoana fohy. Izy dia mpangarom-paosy ary mivava amin'ny zavatra rehetra . Na dia amin'ny fahoriany rehetra aza dia alika mahafinaritra sy be fitiavana izy. '
Chloe the Pocket Beagle toy ny alika kely amin'ny 4 volana
Chloe the Pocket Beagle toy ny alika kely
Fako an'ny alika kely Olde English Pocket Beagle, sary nahazoana alàlana avy amin'ny Pocket Beagles USA
Pocket Beagle puppy, sary nahazoana lalana avy tamin'i Pocket Beagles USA
Cassie the Pocket Beagle puppy, sary natolotry ny Pocket Beagles USA
corgi Jack Russell Mix toetra
Mac the Pocket Beagle puppy, sary nahazoana lalana avy tamin'i Pocket Beagles USA
Sam the Pocket Beagle puppy, sary natolotry ny Pocket Beagles USA
sarin'ny alika coton de tulear
Alika kely mpanao ady totohondry 6 herinandro
vovoka volom-borona sinoa misy volo